Xildhibaannada golaha shacabka oo Ansixiyay Xeerka Matalaadda gobolka Banaadir – HalQaran.com
Xildhibaannada golaha shacabka oo Ansixiyay Xeerka Matalaadda gobolka Banaadir
June 27, 2020 HalQaran Staff	0 Comments ansixin, golaha Shacabka, Xeerka matalaada gobolka Banaadir, xildhibaano
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaanada Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya ayaa Sabtida maanta ah waxa ay ansixiyeen Xeerka metelaada Gobolka Banaadir oo maalmihii la soo dhaafay Golaha si adag ay uga doodayeen.
142 Xildhibaan ayaa ansixisay Xeerka Matalaada Gobolka Banaadir, waxaa diiday Afar Xildhibaan, waxaana sidaasi ansax ku noqday Xeerkaan.
Xeerka Matalaada Gobolka Banaadir ayaa wuxuu dhigayaa 13 Xubnood in la siiyo Gobolka Banaadir, maadaama Xildhibaanno gaaraya 140 soo jeedintaas ay horgeeyeen Golaha.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta wuxuu si rasmi ah ugu hiiliyay Gobolka Banaadir, waxaana tani ay noqonaysa guul soo hooyatay.
Xildhibaannada Golaha shacabka Soomaaliya qaarkood ayaa soo dhaweeyay tallaabada maanta Golaha ku ansixiyeen Xeerka Matalaada Gobolka Banaadir.
← UPDATE: Kulankii maanta ee Aqalka sare oo baaqday & Madaxtooyada Somaliya oo…
Wax badan ka ogow labada nooc ee doorasho oo ay shaacisay Xaliimo Yarey & Xilliga la qabanayo →
November 16, 2019 November 16, 2019 Weriye Ahmed Abdi 0
December 30, 2019 HalQaran Staff 0